Zimbabwe Yokurudzirwa Kusimudzira Mitauro Midiki
Svondo, Kukadzi 07, 2016 Local time: 14:47
HARARE— Mitauro yechivanhu, zvikuru mitauro yemarudzi madiki, inofanirwa kuchengetedzwa kuitira kuti mitauro iyi isaparare. Mashoko aya akabuda pamusangano wakaitwa neChipiri muHarare. Vachitaura pamusangano wakarongwa nebazi rezvekudyidzana neveruzhinji pamuzinda weAmerica muZimbabwe, nyanzvi mururimi rweShona, uye vari mukuru wepepanhau repaindaneti re Chiringiro, Doctor Charlton Tsodzo, vakati mitauro yechivanhu inogona kuparara kana ikasasimudzirwa nenzira yakakwana.
VaTsodzo, avo vanova hama yemunyori ane mukurumbira munyika, VaThompson Tsodzo, vakati zviri kuitika pasi rose zvinoratidza kuti mimwe mitauro inogona kuparara ikasachengetedzwa zvine hudzamu.
VaTsodzo vakati chinosuwisa ndechekuti vanhu vakawanda vave kutarisira pasi mitauro yavo sezvo zvese zvavanoita vave kuzviita nenzira irinyore nemutauro weChirungu.
Vakatiwo izvi zvinoita kuti mutauro uparare zvichibva zvakonzerawo kuparara kwetsika nemagariro evanhu. Vakati kuti izvi zvisaitike, panodiwa matanho anotorwa okukuridzira mitauro pachitevedzerwa nzira yakaita sokuita mabhizimusi nemitauro iyoyi.
Vakatiwo mabasa akaita seiwaya ave kutoitwa nemakambani anosanganisira Microsoft.
Mumwe wevakapinda musangano uyu, Rudombo Tenga, akakuridzirawo vechidiki kuti vasarasike gwara nenyaya yokutevedzera chirungu uye vasanyare kutaura nemitauro yavo.
VaTsodzo vane sangano reMaendeleo iro rinoshanda nemapazi ehurumende mukunyora magwaro ehurumende kubva muChirungu vachiaisa mururimi rweShona.
Zimbabwe iri mukati mekugadzira bumbiro idzva remitemo yenyika, asi pane
kusawirirana mumapato ezvematongerwo enyika pakuti mitauro yechivanhu yemarudzi madiki kuti inge ichishandiswawo semitauro zviri pamutemo.